စိတ်ချမ်းမြေ့လို့ ပျော်ရွှင်စွာနေ နေကြပါရဲ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်ချမ်းမြေ့လို့ ပျော်ရွှင်စွာနေ နေကြပါရဲ့။
စိတ်ချမ်းမြေ့လို့ ပျော်ရွှင်စွာနေ နေကြပါရဲ့။
Posted by ခင်ခ on Nov 21, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
“ မူးကြီးမတ်ကြီးများ စုံညီစွာ အခစားရောက်ရင်ဖြင့် ညီလာခံ စကြရအောင်လား´´
“စုံညီစွာ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သံတော်ဦးတင်ပါသည် ဘုရား´´
“အိမ်း ဒါဖြင့် ညီလာခံ စကြပါဆို့၊ ပထမ ဆုံးအနေနဲ့ သိချင်တာက တိုင်းပြည် စပါးဆန်ရေ အခြေအနေ ကို သံတော်ဦးတင်ကြစမ်းမောင်မင်းတို့´´
“ကျွန်တော်မျိုး ရိတ္ခာဝန်အနေနဲ့ သံတော်ဦးတင်အပ်ပါသည် စပါးဆန်ရေ အခြေအနေမှာ ဒီလအတွက် အထက်လူကြီးအဆင့်ကနေ ဟိုး အောက်ခြေ ထင်းထမ်းလုလင်အထိ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ဆန် ၃ အိတ်စီ ဝေဌပေးထားကြောင်းပါ ဘုရား´´
“အိမ်း ကြားရတာ ၀မ်းသာပိတိဖြစ်မိတယ် ၀န်မင်း´´
“မှန်လှပါ ကျွန်တော်မျိုးက စာဖိုဆောင်ဝန်မင်းပါဘုရား´´
“မောင်မင်း ဘာများလျောက်တင်ချင်လို့လဲ တင်စေဗျာ´´
“ဆန် ၃ အိတ်စီဝေဌသည်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဘုရား´´
“အေးလေ ၃ အိတ်စီဝေလို့ ရိတ္ခာဝန်က သံတော်ဦးတင်ခဲ့တာပေါ့ မောင်မင်းကလည်း အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲ´´
“ဒီလိုပါဘုရား စာဖိုဆောင်က ထင်းထမ်းတဲ့လုလင် ရခဲ့တဲ့ ဆန်တစ်အိတ်အရွယ်က ဇီးထုပ်အရွယ်ပလပ် စတစ်အိတ်လေးနဲ့ ၃ အိတ်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား´´
“ဟေ စစ်သေနာပတိကြီး ရတဲ့အိတ်ကရော ဘယ်အရွယ်လဲ သံတော်ဦးတင်စမ်း´´
“၂ ပြည် ၀င်အိတ် နဲ့ ၃ အိတ်ရပါတယ်ဘုရား´´
“ဟေ ဒါဆို မလိမ်မညာသံတော်ဦးတင်ပြီး မရိုးမဖြောင့်တဲ့ လုပ်ရပ်လုပ်သူ ရိတ္ခာဝန်ကအား သတ်စေ´´
“အရှင်ဘုရား ပုဏ္ဏားတော်ကြီး တင်လျောက်ပါရစေ ဘုရား´´
“မောင်မင်း ဘာများတင်စရာရှိလည်း ငါကိုယ်တော် ခွင့်ပြုတော်မူတယ်´´
“အရှင်ဘုရား ရိတ္ခာဝန်ကို သတ်စေအမိန့်အား ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်ကြောင်းပါဘုရား၊ အရှင်ရဲ့ မြောက်နန်းစံ မိဘုရားကြီးရဲ့ အကိုတော် သူမို့ပါဘုရား´´
“ဟေ ဟုတ်ပေသားဘဲ ဒါဆိုလည်း ရိတ္ခာဝန်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကို ဆိုင်းငံပြီး နောက်ညီလာခံမှ ပြန်စီရင်မယ်၊ အခုညီလာခံသိမ်းကြစေဗျား´´
“အို အို အေး အေး အို တိတ်ပါလူလေး သားလှလေးမျက်နှာ၊ သားလေး အိပ်တော့လေ မေကြီး သီချင်းဆို သိပ်မယ်လေနော်´´
“မိတ္ထီလာကန်ဝယ် ဖားကောက်ခဲ့ပါ့မယ်ကွယ် ဗျိုင်းရှေ့က ပြန်ပြန်ကာရယ်´´
“ဟေ့ လူတွေ ဘာလာကြည့်ပြီး ဘာတွေပြောနေတာလဲ သွား သွား ဝေေ၀းသွား ဒီမှာသားလေး အိပ်နေတယ် လန့်နိုးရင် နင်တို့မလွယ်ဘူး၊ ဘာမှတ်လဲ သွားကြစမ်း´´
“သွား လို့ပြောနေတာ မရဘူးလာ၊ ငါ ကလေးနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလား ဟင်း´´
“အခုတစ်ခါ အလှည့်ကျတဲ့ တေးသံရှင်ကတော့ အလကားရမ် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ´´
“ဟေ့လူ ဗညားဟန် ဆိုလည်း ဗညားဟန်လုပ်လေ ဘာလဲ အလကားရမ် တဲ့´´
“ဟာ ဟုတ်ပါတယ် ဒီကောင် အသိဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးပေးလိုက် ပုဂံဆေးပေးလိုက်နဲ့ ရမ် အလကားသောက် နေလို့ အလကားရမ်တဲ့ သူအမည်က သိပြီလား တာတေ´´
“ဒါဆိုလည်း အလကားရမ် ဆိုမယ်ဆိုလည်းဆိုဗျ´´
“ကျွန်တော် သီဆိုမယ့် သီချင်းကတော့ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့ ရန်ကုန်သူပါ´´
“နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ဆိုတော့ ဆရာတင်က ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲဟင် နန်းတော်နောက်မှာရော တစ်ယောက်ရှိတာလား´´
“ဟ ကောင်ရ အဲဒါတော့ ငါဘယ်သိမလဲ မင်းသိချင်ရင် မင်းဘကြီးသွားမေးပါလား´´
“ငါ့ဘကြီးက မရှိတော့ဘူးကွ၊ လူပြည်ကနေ နတ်ပြည်ကို အမြန်ရထားစီးပြီးသွားတာ ကြာလှပေါ့´´
“ဒါဆို မင်းဘကြီးက နတ်ပြည်ရောက်နေပြီပေါ့´´
“ဟင် မင်းဘဲ နတ်ပြည်ကို အမြန်ရထားစီးသွားတယ်ဆို´´
“ဟုတ်တယ်လေ ငါ့ဘကြီးစီးသွားတဲ့ရထားက လမ်းရေကျော်လို့ဆိုလား ရထားလမ်းဘာဖြစ်လို့ဆိုလား လမ်းမှာညအိပ်နေရလို့တော့ကြားရတာဘဲလေ´´
“ကဲ ကျောင်းတက်ပြီ နော်´´
“မင်္ဂလာပါ တပည့်တို့၊ ဒီနေ့ ဆရာမ ဆိုတာလိုက်ဆိုမယ်နော်´´
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ ´´
“က ကညစ် ပေမှာချစ်´´
“ခ ခရာ ပုလိပ်မှုတ်တာ´´
“ဂ ဂဏန်း အကင်ဆိုင်ဖမ်း´´
“ဆရာမ အပြင်က လူကြီးတွေ သားသားတို့ကို လာချောင်းကြည့်နေတယ်´´
“ဟေ့ လူတွေ စာသင်နေတယ် စာသင်ခန်းရှေ့မှာ လာရစ်သီရစ်သီလုပ်မနေနဲ့ ကြိမ်လုံးစာမိသွားမယ် ဘာမှတ်လဲ သွားကြကိုယ့်လမ်းကို ဟင်း´´
သူတို့ကတော့ တစ်မျိုးဗျ၊ တစ်ယောက်က ဂျာနယ်အပိုင်းအစ စာရွက်တွေကို သူ့တို့ရှေ့မှာစုထားပြီး အဲဒီ အပိုင်းအစ စာရွက်တွေကို နှစ်ယောက်ကထိုင်ဖတ်နေတယ်၊ အနားမှာတစ်ယောက်ကတော့ စက္ကူကို ဆေးလိပ်လိုလိပ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ပုံစံနဲ့ တွေးနေကာပြုံးလို့နေလေရဲ။ အဲတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော် တို့ဆီကို ခြေသံဖွဖွလေးနဲ့လာပြီး အနားရောက်တော့ ပါးစပ်ကို လက်ညိုးလေးနဲ့ကာ လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ဒီလိုပြောလာတယ် မနည်းကိုနားဆိုက်ထောင်လိုက်ရတာပေါ့။ ပြောပြီးတာနဲ့ ခုနလူတွေနားသွားထိုင်နေတယ်။ ခဏနေတော့ အဲလိုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့နား လာပြီး ခုနစကားဘဲ လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပြောပြန်တယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်သွားထိုင်လိုက် လာပြောလိုက်နဲ့ သူမှာ အလုပ်ကိုရှုပ်နေလို့ အားနာစွာနဲ့ သူတို့အခန်းက ခွာလို့ထွက်ခဲ့ ရတော့တယ်၊ အော် သူလာပြောတဲ့ စကားက
“ဆူညံခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ သူတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေရှာနေတယ်၊ အစည်းဝေးလုပ်နေကြတယ်´´တဲ့။
ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော့ တစ်ခါတုန်းက စိတ္တဇဆေးရုံက ဆရာဝန်တစ်ဦးဆီ အလည်ရောက်တုန်း စိတ်ဝေဒနာ ရှင်တွေထားတဲ့အဆောင်ဘက်ကို ရောက်ခဲ့စဉ်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းအဖြစ် အခန်းလေးတွေမှာ ပြုမူနေပုံတွေကို ပြန်လည်ခံစားရေးလိုက်တာပါ။
အဲဒီမှာတွေးမိတဲ့ အတွေးက လူတွေဟာ ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာ စိတ်ပုံမှန်ရှိတာ စိတ်ပုံမှန်မရှိတာတွေထက် မိမိနဲ့ သဟဇာတသင့်တဲ့ ၀န်းကျင်လေးတွေမှာ မိမိနဲ့ အပေးအယူသင့်တဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ဆို စိတ်ပျော် ရွှင်လွတ်လပ်နေကြပါလားလို့ရယ် လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ရှိကာ ကိုယ်ဝန်းကျင်လေး၌ နေတတ် ရင်တော့ ကျေနပ်စရာ တွေရှိနေကြပါတယ်လေ။
ထရံကာ ဓနိမိုးနဲ့ မိုးလုံလေလုံတဲအိမ်လေးနဲ့နေပြီး တစ်နေ့လုပ်ရင် တစ်နေ့လုပ်ခရတဲ့ အတန်းပညာ ၄ တန်း လောက်ဘဲရှိကြသော လက်သမားမိသားစုကို မင်းတို့ထရံကာဓနိမိုး တဲအိမ်လေးနဲ့နေပြီး ပညာကလည်းမတတ် ဆင်းရဲလိုက်ကြတာကွာလို့ နှိမ်ပြောရင် သူတို့က ဟားတိုက်လို့ရယ်ပြီးပြောမှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ထမင်းနပ်မှန် အောင်စားပြီး ညဆိုခေါင်းအေးစွာအိပ်ရလို့ စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့ တကယ်လည်း သူတို့တွေ သူတို့ဘ၀နဲ့တော့ ပျော်လို့ရွှင်လို့ပါဗျာ။
ဒါကြောင့် ဆင်းရဲတိုင်းလည်း စိတ်ချမ်းသာမှု့မရှိဘူး မပျော်နိုင်ကြဘူးလို့ ယူဆလို့မရသလို စိတ်မူမမှန် စိတ်ဝေဒနာရှင်မို့လည်း ပျော်ရွှင်မှု့မရှိ နေနေရတယ် လို့ ယူဆလို့မရပါကြောင်း ခင်ခ အတွေးပါးပါး အရေးများဖြင့်——။
အင်းလေ။ အာ့ကြောင့်ပဲ အရမ်းစိတ်ညစ်ရင် ရူးချင်လာပြီနော်လို့ပြောကြတာနေမှာ ကိုခ။
တစ်ခါတစ်ခါ အရူးလက်မှတ်လေး ယူထားရမလား စိတ်ကူးမိသေး။ နေချင်သလိုနေ၊ပြောချင်တာပြော။
ခုလည်းပဲ အကောင်းတော့ ဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကြောင်းမဟုတ် တစ်ကြောင်း ရူးနေမိတာ။
ဦးဆုံးမန့်သူလေး မခိုင်ဇာရေ ကျေးဇူးပါ။
အရူးလက်မှတ်ရထားရင် တစ်ချို့ဥပဒေပြစ်ဒဏ်ကင်းလွှတ်ခွင့် ရတယ်ဆိုဘဲ ကြားဖူးတာပါ။
အရူးလို့ အရပ်အခေါ်သုံးကြပေမယ့် သူတို့ကို ယဉ်ကျေးစွာ ဒီလိုခေါ်ကြတယ် စိတ်ဝေဒနာရှင်တဲ့လေ။
တစ်ချို့ကပြောတယ် စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူသားက အဲဒီစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေတဲ့လေ ဟုတ်လားတော့သိဘူးဗျ။
ပုထုဇဉ်လူသားဟူသမျှ တနည်းမဟုတ်တနည်း ရူးနေကြတာပါပဲလေ
အာဏာရူး၊ ဥစ္စာရူး၊ တဏှာရူး ..ပညာရူး.. အချစ်ရူး အစုံပေါ့..
ပါးပါးလေးရူးတာရယ် ခပ်ထူထူရူးသူရယ် မထူမပါးရူးနေကြသူတွေ ကြားထဲမှာ တမူးသာတယ် ထင်သူတွေလည်းရှိသပေါ့လေ..
သူ့အခွံနဲ့ သူ့အဆံ တန်သလောက်ရပြီး တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနိုင်တာလည်း ချမ်းသာမှု တမျိုးပါပဲ ဦးခင်ခရေ
ပညာသားပါပြီး အရမ်းလဲရီရလို့ ချီးကျူးလောက်ပါရဲ့။
စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ကိတ်စက ရှာဖွေလို့မရ လုပ်ယူလို့မရတာကြောင့်
သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာကို အားတောင်ကျရမလိုပါလား အန်ကယ်ခရေ။
သူ့သဘောသူဆောင် အလိုလိုစိတ်ချမ်းသာနေရတဲ့ သူက အရူးဆိုရင်…
သူများသဘောမကြည့် ကိုယ့်စိတ်ပဲကိုယ်ကြည့် ချမ်းသာရတဲ့ အရူးတော့ တစ်ရက်လောက် ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိ…
တစ်ရက်က နည်းနည်းများပါတယ် နှင်းနှင်းရယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက် ရူးချင်တာ။ ပြောချင်တာလေးပြောပြီး ပြန်ကောင်းသွား။
“အမီး ရူးသွားလို့ပါနော်” ပေါ့။ (ရမယ်ဆိုရင် ပြောပါတယ်)။
ခုတလောပြောချင်တဲ့ စကားတွေက လူကောင်းအနေနဲ့ဆို ပြောလို့ရဘူးတော့။
ဟုတ်လား…ဟီး…သူများစိတ်၊သူများမျက်နှာ ကြည့်နေရတဲ့ဘ၀ကြီး ငြီးငွေ့မိလို့
၁ရက်တောင် နည်းနေသေးလားလို့ လောဘသတ်ပြောလိုက်တာ….
အာ့ဆို…ဆွိ… ၁၅ မိနစ် ဖဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်…
တနေ့ တနေ့ကို ၁၅မိနစ် ကို ၉၆ခါလောက်စီ
ရပါတယ်လေ။ ၁၅ မိနစ်က လုံလောက် ပါတယ်။
ပြောချင်ရာပြောတဲ့ အရူးစကားကို နားထောင်မဲ့သူရှိလို့ကတော့ ရူးပျော်ပါရဲ့။
ရူးကြည့်ကြပါလားဟင်င်င်င် ဆိုတော့ ညီမလေးမိဂီက မမတို့ကို ရူးဖော်ညှိနေတာပေါ့နော်
သူငယ်ချင်း တယောက်မှာ အရူး မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံစာရှိလေရဲ့……..
သူနဲ့တခြားလူတယောက် တနေ့ရန်ဖြစ်လေတော့…..
တခြားလူက မင်းအရူးပဲလို့ ပြောသတဲ့……
သူငယ်ချင်းက ငါက အရူးမဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံစာရှိတယ်….
မင်းသာ မရှိတာ မင်းအရူးလို့ ပြန်ပြောတော့…..
တခြားလူခမျာ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ဘာပြန်ပြောရမလဲ မသိဖြစ်သွားပါတယ်….
စာဖတ်သူတို့ ကော ထောက်ခံစာရှိလားဟင်……
မော်တော်နေ ရေထဲ တဲ့ကိုကိုခ ရေ အဲဒိတော့ ပျော်သလိုနေတတ်တာလဲ အသက်ရှည်ဆေးတစ်မျိုးပါပဲနော် အဲပျော်ရပြီးရော ဆိုပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ လွပ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့ မထိပါးစေ့ချင်ဘူး…။ တစ်ချို့ကလည်း ကိုယ့် ပျော်ပါးမှုအတွက် ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူတစ်ပါးကို နှောက်ယှက်နေကြတာတွေ ရိုက်သတ်လို့ မကုန်ရှိနေတယ်…။ တစ်ခါက သူကြီးပြောတဲ့စကား ပြန်ပြောရရင် ” စောက်ကျင့်တွေ ဖျောက်ကြ” လို့ ကြုံးအော်လိုက်ရမကောင်းရှိတော့မယ်…။
ကွန်မန့်လေးများ ချီးမြှင့်ပေးကြသော သူအပေါင်းကို ခင်ခ မှ ကျေးဇူးပါနော်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်လို လျောက်ကာသွား စားချင်ရာစား နေချင်သလိုနေလိုက်ချင်ပါရဲ့၊ မွန်းကြပ်တဲ့ လူမှု့ဘ၀အတွက် လှုပ်ရှားနေရတဲ့အခါ ညှီးတွားမိပါရဲ့ဗျာ။ ဒါလည်းအတွေးပါဘဲလေ—။
ကျနော်လည်း ဘာမှမပြောချင်လို့(၃)ခါမြောက် ဝင်ဖတ်သွားပါကြောင်းးးးးးး
အော် ကိုဆာမိရယ် ၃ ခါမြောက်တောင် ၀င်ဖတ်ပြီးမန့်ရှာသူမို့ ၀မ်းသာအားရကျေးဇူးပါဗျ။
သည်နေ့မနက် ၉း၀၀နာရီကစပြီး အိုင်စီတီပတ်ခ်မှာ WCDMA ၄၂လုံးကို ကြမ်းခင်းဈေး၇သိန်းနဲ့စတင်ရောင်းချနေပြီ လို့သိရပါတယ်။
ဒါလည်း ရူးခြင်းတမျိုးပါပဲလား ဦးခင်ခရေ …
သူ့နေရာနဲ့ သူ ရူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေ နဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ယူနေကြတာထင်ပါရဲ့ ….
အမှန်ဘဲ အမှန်ဘဲ ရွာသူ jujuma ရေ။ ရူးလည်းရူးကြပါပေ့ကွယ်။
စာချစ်သူ ၀ါသနာရှင်များအား ပေးဖတ်ရန်
ကူးယူထားလိုက်ပါတယ် နောက်လည်း အားပေချင်ပါသည်။